Ku noolaanshaha / ku noolaanshaha weligiis
Raadi tifaftirayaasha Nolosha / Nolosha Weligeed ah
Vol. 14 Maya 5
Vol. 14 Maya 6
Vol. 15 Maya 1
Vol. 15 Maya 2
HADDII UGU DAMBEEYA
Vol. 15 Maya 3
Vol. 15 Maya 4
Vol. 15 Maya 5
Vol. 15 Maya 6
Vol. 16 Maya 1
Vol. 16 Maya 2 - Maqnaanshaha
Meelo badan oo dhagax ah ayaa u muuqda in ay dhinteen, ninna wuxuu u maleynayaa inuu yahay nolol la'aan; Hase yeeshee, haddii qaab-dhismeedku uu ka yimaado fiiso dhaqso ah, sababtuna tahay ficilka volciga, ama si tartiib-tartiib ah oo ay ku dhisto qulqulaad ka timaada socodka, socodka garaaca nolosha ee dhismaha dhagaxaas.
Da'da ayaa laga yaabaa inay gudbaan ka hor intaan unug ka muuqan qaab dhismeedka adag ee dhagaxa. Nolosha cellka ee dhagaxa waxay ku bilaabmaysaa samaynta macdanta. By neefsiga dhulka, by ballaarinta iyo foosha, by action magnetic iyo koronto ee biyaha iyo iftiinka, kristaanku waxay ka soo baxaan dhagaxa. Dhagax iyo kraash waxay ka mid yihiin boqortooyo isku mid ah, laakiin waqti dheer oo waqti dheer ah ayaa kala saaraa qaab dhismeedka iyo horumarka.
Lichen wuxuu ka soo baxaa oo ka soo baxaa dhagaxa dhagaxiisa. Oo geedkii ubbada ahaa wuxuu u minguuriyey sida ciidda oo kale, Oo wuxuu ku kor socdaa dabaysha cirwareenta ah, Oo ubaxiisaana wuxuu u kala firdhiyaa sidii dabayl oo kale. Labaduba waa xubno ka mid ah warshadda dhirta, mid waa mid hooseeya, jajab ama jajab la mid ah, kan kale wuxuu ahaa mid aad u sarreeya oo geed leh. Calaamad iyo faras waa xayawaan, laakiin caannaanta cagaarka ayaa si buuxda u qalma in la dareemo socodka nolosha ee faras dhiig leh uu og yahay. Faraca laga saaro dhammaantood waa nin iyo jidhkiisa, jidhka aadanaha.
Noloshu waa dawlad kasta oo ka mid ah qaab-dhismeed ama u-noolasho ama la xiriirto Nolosha iyada oo loo marayo nolosheeda gaarka ah ee hadda, iyo dhammaan qaybaha ay wada shaqeeyaan si ay u gutaan shaqadooda ujeedada nolosha dhismahaas, , iyo halka uu ururka guud ahaan la xariiro awooda daadka ee Nolosha iyo qaababka noloshooda.
Noloshu waa bake aan muuqan oo aan la arki karin, gudaha ama dibedda moolalka oo dhasha wax kasta. Our dunida-iyo adduunka, dayaxa, qorraxda, xiddigaha iyo xiddigaha xiddig kuwaas oo u muuqda in ay u eg yihiin gems loo dhigo cirka ama sida qurubyada shucaac ah la hakiyay bannaan aan dhamaad lahayn, dhammaan waxay ku dhashay iyo ku dhashay iyo joogtayn by nolosha aan la arki karin.
Inta lagu jiro baddan baaxad weyn ee nolosha, taas oo ah maaddada iyo muuqaalka dhinaca, waxaa jira sir-mareen oo miyir-qab ah oo neefsanaya oo waa nolosha caqli ahaan iyada oo loo marayo baddan nolosheeda.
Dunida annaguna waxaan la soconaa jimicsiga iyo caalamkeena atmospheres, waa xarumo muuqda ama gangliyon ah oo ku jira jidhka aan muuqan ee baddaha nolosha.
Jaangooyooyinka caalamkeena ah waxay u dhaqmaan sida sanbabaha kuwaas oo neefsada nolosha nolosha badda nolosha ee qorraxda, taas oo ah wadnaha caalamka. Nolosha noloshu waxay ka timaaddaa qorraxda dhulka, taas oo ay quudinayso, ka dibna waxay ka gudubtaa hareeraheeda dhulka iyadoo la marayo habka dayaxda oo ay ka soo baxdo caalamkeena bakhaarada nolosha. Dhulkeena iyo asxaabtiisa waxay yihiin ilma-galeenka caalamiga ah, kaas oo ah qaab-dhismeedka jirka qofka miyirka ah ama uu ku yaryahay caalamka bakeeriga nolosha, iyo iyada oo ay u neefsan doonto nolosha caqliga leh.
Waxa uu ku sharraxay jawigeeda sida isagoo kor u kaca ah, man wuxuu udhaqaaqay dhulka, laakiin ma uusan xiriirin nolosha nolosha baddaha nolosha. Ma uusan qaadin nolosha. Ma nool yahay. Waxa uu ku seexdo meel aan la garanayn, oo aan dhicin, xayiraad la'aan ah oo aan ogeyn bakhaarada nolosha, laakiin wuxuu inta badan ku riyoodaa inuu soo jiito, ama riyooyin ku riyoodo noloshiisa. Seldom waa mid ka mid ah ragga oo ka soo baxa xuduudiisa qallafsan, oo ku noolyahay badda barta nolosha. Sida caadiga ah ragga waxay ku seexdaan xilligooda jiritaanka maskaxeed (kuwaas oo ay ugu yeeraan nolosha dhulka), oo ay ka careysiiso cabsida joogtada ah ee cabsida, xanuunka iyo dhibaatada, ama ay ku riyootay farxad iyo farxad.
Haddiise aadanuhu la xiriirin daadadka nolosha ee nolosha, isagu dhab ahaan ma noolaado. Xaaladdiisa hadda jirta macquul maahan in ninka uu jidhkiisa la xiriiro baddaha nolosha ee noloshiisa ugu weyn ee nolosha. Xiriiro xayawaan dabiici ah oo si buuxda loo sameeyay ama noloshooda ku jira noloshooda hadda, sababtoo ah aaladdiisa ayaa loo geeyaa nolosha; laakiin looma xiriiri karo caqliga nolosha sababtoo ah ma jiraan wax caqli ah oo caqli-gal ah oo ka dhex jira si loo sameeyo xiriir noocaas ah.
Ninka ma la xidhiidhi karo baddaha nolosha ee nolosha adduunyo, mana joogo waqtigan awood u leh inuu la xiriiro caqli-nololeedka nolosha. Jidhkiisa waa xayawaan, waxaana ku yaala dhammaan noocyada iyo qaababka noolaha, laakiin ficilka maskaxdiisa wuxuu ka gooyay xidhiidh toos ah oo noloshiisa ka timaada jidhkiisa, wuxuuna ku xiray adduunkiisa, asxaabtiisa gaarka ah. Naxariista rabbaaniga ah ee qaabka sirta ah wuxuu ku noolyahay qaabkiisa, laakiin waa la daboolay oo ka qariyay muuqaalkiisa daruuraha fekerkiisa, waxaana looga hortagayaa in la helo iyada oo loo eegayo rabitaanka xayawaanka uu ku dhuftay. Nin sida maskaxdu ma u oggolaanayo xayawaankiisa si dabiici ah iyo sida dabiiciga ah, iyo xayawaankiisa isaga ka horjoogsaday raadinta dhaxalka rabbaaniga ah iyo ka noolaanshaha sirdoonka daadadka badda ee nolosha.
Xayawaanku waa nool yahay marka noloshu ay kor u kacdo iyo jirkeedana waxaa lagu daraa socodka nolosha. Waxay dareemeysaa socodka nolosha sida ay u kala duwan tahay nooca caynkiisa iyo jiritaanka jidhkiisa si uu u matalo noocyada noocaas ah. Dhaqdhaqaaqiisa waa batari iyada oo noloshu hadda tahay iyo nolosha noloshiisu ay ku raaxaysantahay shakhsiga xayawaanka ee xayawaanka, inkastoo ay tahay mid aan awood u lahayn inuu joojiyo ama sii kordhiyo ama farageliyo socodka nolosha hadda. Xayawaanka ku yaal waddankeeda dabiiciga ahi waa inuu si toos ah u dhaqmaa iyo sida uu dabiicigu u yahay Wuxuu guuraa oo wuxuu la dhaqmaa nolol maalmeedka. Qayb kasta oo ka mid ah waxay la gariireysaa farxadda nolosheeda sida ay isugu soo ururinayaan guga. Nafaqada Nafsiyada degdega ah marka ay tahay raadsashada dabiiciga ama duulimaadka ka yimaada foornada. Ka fogaanshaha saameynta manida iyo xaaladeeda dabiiciga ah waxay u dhaqmaysaa iyada oo aan la moodeynin ama khiyaanayn, waxaana lagu hanuuniyaa si aan caadi ahayn oo dabiiciga ah nolosheeda, marka jirkiisa uu yahay mid dhexdhexaadin ah kaas oo noloshu ku socon karto. Dareenkoodu wuxuu ka digayaa khatarta, laakiin waxa ay ka baqdaa wax dhib ah. Dhibaatada ugu weyn ee ay ku adkeyneyso awoodda aadka u xoogan waa socodka nolosha, iyo dareenka dareenka noloshooda.
Fikradaha iyo hubin la'aanta dadka iyo caqliga jidhkiisa ayaa ka hortagaya inay la kulmaan farxad nololeed, maadaama ay ku ciyaareyso jidh xayawaan kali ah.
Ninku wuxuu ku farxi karaa addimada iyo dharka jilicsan, qoorta guntiga ah iyo madaxa ganaaxa ee faras badan oo dhisay; laakiin ma dareemayo awoodda nololeed ee duurjoogta, iyo sida ay u dareemeyso, iyadoo la ruxruxo madaxa iyo duufaanka gariirku, hawada qaniinyo, dhulka ku dhufta oo u gudubta sida dabayshu ka baxdo bannaanka.
Waxaa laga yaaba in laga yaabo in laga yiraahdo mawduucyada kalluumeysiga ah, ee ku yaalla dhaqdhaqaaqyada quruxda badan ee foosheeda iyo daboolka iyo shimbiraha dhinacyadiisa iftiinka qorraxda, maadaama kalluunka la joojiyo ama kor u kaco ama hoos u dhaco ama si sahlan iyo naxariis leh u maro biyaha . Laakiin ma awoodno inaan helno nolosha hadda ee awoodda siinaysa oo u hagaya salmon iyo asxaabtiisa, maaddaama ay ka baxaan badda wabiga wabiga dakhligooda sannadlaha ah ee ay soo maraan, iyo subaxdii, ka hor qorraxdu , marka daadadka guga ay ka soo baxaan gooynta dhalaalaya, ku raaxeeysa boodboodka biyaha qabow iyo, sida ugu fudud ee biyaha, gawaarida wareega dhagaxyada kufsiga; markii ay kor u kacaan, oo ay geedkii qoolley u baxaan iyagoo caydh ah; maadaama ay ku dhuftey fallaadhaha, iyo, haddii dhicitaankoodu sarreeyo oo ay dib ugu soo noqdaan mugga, ha iska daayaan, laakiin mar kale ku dhaaf oo ku soo duub dhantii guntooda; ka dibna dibadda iyo boogaha biyaha, halkaas oo ay ka helayaan ujeedada socdaalkooda sannadlaha ah oo ay ku sameeyaan qaansadooda. Waxay ku dhaqaaqaan nolosha hadda.
Gorgool ayaa loo qaadaa sida calaamad u ah boqortooyada waxaana loo isticmaalaa calaamad xor ah. Waxaan ka hadleynaa xooggiisa iyo geesinimadiisa iyo garab ballaadhan oo garabka ah, laakiin ma dareemeyno inaan ku faraxsanahay dhaqdhaqaaqyada baalashiisa sida uu u wareego oo u xajiyo, korna u qaado, la xariirto noloshiisa noloshiisa isla markaana ay ku dheehan tahay xagga danbe duulimaad ama gabbaldhac ah oo u muuqda si degan qoraxda.
Xitaa xitaa lama xiriirin geedka maadaama ay la xiriirto nolosheeda haatan. Ma garanayno sida geedku u dhaqmo oo uu xoojiyo dabaysha, sida ay u xannaaneeyeen oo ay u cabbeen roobabka, sida xididdada ay ula xiriiraan noloshooda hadda iyo sida ay u midabayaan iftiinka iyo walaxda carrada. Waxaa jira warar la isla dhex marayo sida geed geed dheer u kiciya si ay u sarreeyaan heerarka sare. Miyaan la xiriiri karnaa nolosha hadda ee geedkan aan ogaan karno in geedku uusan kor u qaadin dheecaankiisa. Waxaan ogaan laheyn in nolosha noloshu ay kor ugu kacayso dhammaan qaybaha geedka ee ku haboon inay helaan.
Dhirta, kalluunka, shimbiraha iyo bahalka ayaa nool, ilaa iyo inta noolaha ay ku jiraan korodhka iyo ku haboonaanta inay la xiriiraan currents noloshooda. Laakiin marka jiritaanka jidhkooda aan la ilaalin karin ama meeshii ficilkeeda la farageliyay, markaa si toos ah ugama soo xiriiri karto nolosheeda hadda jirta, dhaqdhaqaaquna wuxuu bilaabmaa habka uu u dhimanayo xumad iyo burbur.
Dadku hadda ma dareemi karaan farxad ku saabsan noolaha nool ee taabashada noloshooda noloshooda, hase yeeshee wuxuu feker ahaan u gali karaa bini'aadamka kuwaas oo uu ogaan lahaa oo uu la kulmi doono dareemo dareen ah oo ah dareenka nolosha ee ka yimaada munaasabadaha hay'adahaas.